トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ General zanabola rehefa mindrana vola amin'ny banky
Raha hisambotra-bola avy amin'ny fikambanana ara-bola, ny voalohany ho tonga amin'ny ho olona maro izay banky.
fahatsapana ny fiarovana, satria raisina ho toy izay ambony kokoa noho mpanjifa toy ny fitantanam-bola.
Na izany aza, dia hisambotra vola avy any amin'ny banky, dia mety koa ny vitsivitsy izay efa zatra tena zanabola mba milamina. Tsy mampiditra anao ho any amin'ny nindrana fanadinana sy liana amin'ny
mifandray / tombony sy ny fatiantoka
ny nindram-bola amin'ny banky
olona voalohany nindram-bola raha
ny raharaha 'ireo izay hisambotra voalohany vola, ny zanabola no takalo tahan'ny dia ny taona momba ny 4%. Raha
nindramina raha iray volana 100.000 Yen, liana dia ho 100.000 Yen × 4% × 30/365 = 328 Yen.
Amin'izao fotoana izao, ny fanjif?na hetra dia 8% ny vanim-potoana. Raha ny
antsasaky ny izany, Mino aho fa be tao ambany, dia maro no mihevitra.
Teny an-dalana, rehefa nisambo-bola voalohany avy amin'ny mpanjifa bola, tokony ho 4,5% ny 5%, dia ny eny anivon'ny tsena.
ihany, raha misy fanovana ny manodidina ny 1%, dia mety koa ireo izay mihevitra sy atao dia tsy ny tsara kokoa ny mpanjifa ara-bola misy ihany koa ny sary toy ny mora toa tsy mandinika.
Na izany aza, raha nindrana 100.000 Yen eo ambanin'ny toe-piainana toy izany koa, tombontsoa ho tonga avy Yen ho 410 369 Yen sy ny fahasamihafana.
izany hoe izany dia rehefa misy vola lehibe, toy ny 300.000 Yen sy 500.000 Yen, ka tokony tsy sarotra ny am-piandohan'ny lahatsoratra sary an-tsaina ny fahasamihafana lehibe.
Raha Efa nisambo-miara-amin'ny lafiny sasany, satria amin'ny maha samy hafa ny vola izany dia ho enta-mavesatra lehibe, nindrana aho fahazoan-dalana avy amin'ny zanabola ambany banky na dia ny 1%.
< I2> Raha mampiasa orinasa maro
dia nindramina avy amin'ny banky na ny mpanjifa maro bola, miezaka ny zanabola avo vola.
Ao amin'ny karatra findramam-bola amin'ny banky lehibe, dia azo inoana indrindra tokony ho eo ho eo amin'ny 14% dia omena ho toy ny fetra ambony. Raha vao
30 tapitrisa nindramina sy ny zanabola habetsaky ny isam-bolana dia ho \_ 3.452.
entana dia tsy izay ihany, koa dia tsy maintsy ho mazava ho azy ny kajy mahaliana vola nindramina izay orinasa hafa. Ny olona izay mindrana any
an-tapitrisany, raha manana 14 isan-jato ny zanabola, tokony mandoa isam-bolana mahaliana ny \_ 11.506.
ny raharaha ny ankapobeny-tsary hamaly fomba, satria ny habetsaky ny vola izay mitambatra ny lehibe indrindra dia aseho toy ny fandoavam-bola, dia mety tena enta-mavesatra dia nitandrina mino fa 15.000 ny 20.000 Yen amin'ny kely indrindra.
toy ny natao hampandeha tsara rehefa hisambotra vola, raha mba hamaly vonjy taitra izany azo lazaina ho maro ny olona miady amin'ny ampahany ny liana.
Na dia eo ambanin'ny hamaly isam-bolana, raha ny marina, tsy niverina ihany no mahaliana, dia tsy latsa-danja ny tantara izany.
mba hisambotra amin'ny ambany noho
zanabola mba hampihenana ny enta-mavesatry ny
liana, dia zava-dehibe ny mifidy ny zanabola ambany orinasa. Izany hoy
, zanabola izay voasoratra ao amin'ny dokam-barotra dia voasoratra isan-karazany avy any ambony fetra ho any ambanin'ny fetra, rehefa tena ampiasainy, ary inona no hisambotra na oviana na zanabola tsy mahafantatra, dia tsy vitsy izay mihevitra ny fanahiana . Mba hampidina ny
zanabola fepetra manaraka dia zava-dehibe.
raha misy fidiram-bola marin-toerana
olona voalohany indrindra dia nindrana, mba hanararaotra ny hampihena ny zanabola, dia zava-dehibe ny mahazo ny sasany ianao tapaka fidiram-bola.
Mazava ho azy fa ambony na mba hahazoana fidiram-bola isan-taona, dia ny hoe zava-dehibe, fa efa lasa manan-danja ho an'ny banky sanda fepetra dia ny hoe "raha araka ny tokony ho olona afaka miverina, na dia rehefa mandeha ny fotoana."
na nindrana toerana no tena misy ny
Ho an'ny olona izay
manana maro ny nindrana, mirona amin'ny tena zanabola avo.
Noho izany, ny fomba izay te-handinika dia mampihena ny toerana nindrana.
ianao trosa fanamafisana dia ny latsaka any an ity sokajy ity, fa Rehefa manana iray amin'ireo ambany zanabola banky fikambanana ara-bola mba mindrana, dia hitarika ho amin'ny fampihenana ny hamaly amin'ny farany. Koa satria ny fitantanana ny mety lasa mora ny ho avy
lafiny banky, dia mety ho nindramina amin'ny zanabola ambany dia ambany.
fotoana voalohany hisambotra vola amin'ny banky, ny zanabola dia tokony ho 5% ho an'ny mpanjifa ara-bola kosa, ny 4 isan-jato no ho eny anivon'ny tsena.
Noho izany, koa mba ho enta-mavesatra ny debit dia ambany ny kitapom-batsy, Zava-dehibe ny mieritreritra momba ny fampiasana ny banky eo amin'ny toerana voalohany. Izany hoy
, raha mafy na dia efa nahazo ny bola vaovao ihany koa any amin'ny banky, zanabola Any ihany no toerana toe-piainana tsara dia hiafara ambony kokoa.
raha, raha ny zava-misy izay nindrana amin'ny fikambanana ara-bola hafa, amin 'ny toetra izay fanamafisana ny trosa koa miaraka amin'ny fomba fijery mba hahazoana antoka ianao manao safidy izay mahasoa ho an'ny tsirairay. Rehefa
caching, tamin'izany fomba izany, "na nindramina mora ny" tsy marina ", na mora ny hamaly, zanabola mora na ambany" dia ny mieritreritra zava-dehibe.
ny raharaha ny olona dia maro ny nindrana, mirona amin'ny tena zanabola avo.
Ny fotoana voalohany hisambotra vola
Bank, tao an-raharaha ny mpanjifa bola amin'ny zanabola tokony ho 5%, tokony ho 4%, no ho eny anivon'ny tsena.